I-China Lady Cross Vamp Sheepkin Slipper mveliso kunye nabathengisi | Yiruihe
I-Vamp isebenzisa imilo enqamlezileyo kuyilo, Ngaba iya kwenza ukuba umntu onxibe imvakalelo elula, igcina ishushu ngokufudumeleyo ngaxeshanye. Imibala eyahlukeneyo inokuchongwa.
Nokuba kuyabanda okanye kuyomile, iperi yeCross Vamp Sheepskin Slipper sesona sipho singcono onokuzinika obu busika! Nokuba luxinzelelo emsebenzini okanye ukusila kwemihla ngemihla, ukunciphisa uxinzelelo kubalulekile.
I-slipper yeli nenekazi liphezulu lesikhumba semvu yenzelwe ukongeza isitayile kunye nokwenza izihlangu kufaneleke ngakumbi. Ngoku xa uchitha ixesha elininzi ekhaya, kunokuba ngumtsalane ukunxiba izihlangu ezikhululekileyo ngokwaneleyo ukwenza oko uhlala ufuna ukukwenza.
Izinto ezingaphezulu kunye nezinto ezingaphakathi zenziwe ngofele lwegusha lwase-Australia olukumgangatho ophezulu, elenza lonke unyawo luzive ngathi lusongelwe kulwandle oluthambileyo.
Iigusha ziyaziwa ngokufudumala, ngakumbi iAustralia Sheepskin, egcina iinyawo zakho zifudumele kwiinyanga ezibandayo zobusika.
Kwaye uboya bunokungena komoya okuhle, nokuba akunakunxitywa ixesha elide. Uyilo oluyingqayizivele lweendawo ezivulekileyo alugqithisi nakwiinyanga ezishushu zasehlotyeni, ke i-100% yase-Australia yokwenene i-Sheepskin slippers ikwaqala ukukhetha amagumbi anomoya-moya ehlotyeni.
Kwaye uboya bendalo bubalasele ekuthinteleni ukukhula kweentsholongwane kunye nokubonelela ngononophelo olusempilweni kusapho lwakho.
Ukuthanjiswa kwesiliphu emazantsi kukubonelela ngesiseko esikhuselekileyo nesinokuthenjwa sokuthintela imikrwelo phantsi. Indawo ye-TPR engenawo manzi kunye ne-anti-slip ithatha ingxolo xa ihamba phantsi
Nokuba unxibe ingubo yakho kusasa, ukhulula iinyawo zakho ezidiniweyo ngokuhlwa, okanye uhlala ekhaya imini yonke, isiliphu esintofontofo yinxalenye yempahla yakho yezihlangu. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ufanelwe okona kulungileyo, isibini semikhono egudileyo ekunika amava obomi obutofotofo.
Egqithileyo Inenekazi elinemibala evulekileyo yeZinyosi zesikhumba
Okulandelayo: I-Lady Cuff yangaphakathi yeSlipper Slipper
I-Lady Sheepskin yangaphakathi eshenxisayo kunye nomvundla woboya woMvundla
Amadoda Sheepskin Slipper ene-Vulcanized Sole